Iindaba -Izinto ezichaphazela ukomelela kokuDinwa kweziNsimbi zeTyhubhu yeeNtsimbi
Ukudinwa amandla ityhubhu intsimbi izinto ityhubhu evela Shandong Derunying uvakalelo kakhulu ezahlukeneyo izinto zangaphandle nezangaphakathi, apho izinto zangaphandle ziquka imilo, ubungakanani, umphezulu egudileyo, kunye nemeko nkonzo okanye ezifana iindawo, kwaye izinto zangaphakathi ziquka ukwakheka, ukuthungwa, ubunyulu, intsalela yoxinzelelo njalo njalo kwizinto ngokwazo. Utshintsho olufihlakeleyo lwezi zinto luya kubangela ukutshintsha okanye umahluko omkhulu ekusebenzeni kokudinwa kwemathiriyeli.
Impembelelo yezinto kumandla okudinwa yinto ebalulekileyo kuphando lokudinwa. Olu phando luza kuba luncedo kuyilo lwenxalenye efanelekileyo yezakhiwo, ukhetho lwezixhobo zetyhubhu zentsimbi ezichanekileyo ezichanekileyo kunye nokwenziwa kweendlela ezibandayo zokwenza ubushushu kunye nokushushu, ngaloo ndlela kuqinisekiswe ngokudinwa okuphezulu kwamalungu.
1. Impembelelo yoxinzelelo loxinzelelo
Ngokwesiqhelo, amandla okudinwa afumaneka ngemilinganiselo kusetyenziswa isampulu egudileyo. Nangona kunjalo, iinotshi ezahlukeneyo, ezinje ngamanyathelo, iindlela eziphambili, imisonto, kunye nemingxunya yeoyile njl.njl. Ubukho bezi notshi zikhokelela kuxinzelelo loxinzelelo, olwenza ubuninzi boxinzelelo kwingcambu yenotshi lube lukhulu kakhulu kunoxinzelelo lwegama, kwaye ihlala iqala ukusilela kokudinwa kwenxalenye.
I-ithiyori yoxinzelelo lokuxinana kwe-Kt: umlinganiso woxinzelelo oluphezulu koxinzelelo lwegama kwingcambu yenotshi efunyenwe ngokwethiyori ye-elastic phantsi kweemeko ezifanelekileyo zelastiki.
Ukusebenza koxinzelelo lokuxinzezeleka koxinzelelo (okanye ukudinwa koxinzelelo lokuxinana) Kf: umlinganiso womda wokudinwa σ-1 yesampulu egudileyo ukuya kumda wokudinwa σ-1n yesampulu yenotshi.
Umlinganiso wokuxinana koxinzelelo olusebenzayo aluchaphazelwa bubungakanani kunye nokumila kwecandelo kuphela, kodwa kukwaneempawu ezibonakalayo zomzimba, ukuqhubekeka, unyango lobushushu kunye nezinye izinto.
Ukuqina koxinzelelo lwentsebenzo yoxinzelelo kuyanda ngobukhali be-notch, kodwa ihlala incinci kune-theoretical yoxinzelelo yoxinzelelo lokuxinana.
Umlinganiso wokungakhathali wenoveli eyaneleyo q: ukungakhathali ukungafani kobuntununtunu kubonisa ubuntununtunu bezinto ezinokubakho kwinotshi yokukhathala kwaye kubalwa ngale ndlela ifomula ilandelayo.
Uluhlu lwedatha ye-q ngu-0-1, kwaye encinci ngu-q, ubuthathaka obuncinci zizinto zetyhubhu yesinyithi engenamthungo kwinotshi. Uvavanyo lubonisa ukuba i-q ayisiyonto esisigxina, kwaye isadibene nobukhulu be-notch; q ngokusisiseko ayihambelani nenotshi kuphela xa i-notch radius inkulu kunexabiso elithile, ixabiso lerediyasi lahlukile kwizinto ezahlukeneyo okanye inqanaba lokuqhubekeka.
2. Impembelelo yobukhulu
Ngenxa yokungafani kobume kunye nokusilela kwangaphakathi kwezinto eziphathekayo, ukwanda kobungakanani kuya kwandisa amathuba okusilela kwezinto, ngaloo ndlela kuncitshiswe umda wokudinwa kwemathiriyeli. Ubukho besiphumo sobungakanani ngumba obalulekileyo ekusebenziseni idatha yokukhathala efunyenwe ngomlinganiso wesampulu encinci elabhoratri ukuya kwinxalenye yesayizi yokwenyani. Akunakwenzeka ukumela ngokupheleleyo nangokufanayo uxinzelelo loxinzelelo, i-gradient yoxinzelelo okanye okunjalo kwinxalenye yesayizi yokwenyani, ke iziphumo zelebhu kunye nokusilela kokudinwa kwamanye amalungu athile kunqanyuliwe.
3. Impembelelo yemeko yokulungisa umphezulu
Amanqaku oomatshini angalinganiyo ahlala ekhona kumphezulu womatshini. La manqaku ayalingana neenotshi ezincinci ezibangela uxinzelelo kuxinzelelo kumbandela, kwaye ziya kunciphisa amandla okudinwa kwemathiriyeli. Uvavanyo lubonisa ukuba, ngentsimbi kunye nealuminium alloys, umda wokudinwa wokurhabaxa koomatshini (ukujika okurhabaxa) kusezantsi kunoko ukucocwa okucolekileyo nge-10% -20% okanye nangaphezulu. Okuphakamileyo kukomelela kwemathiriyeli, kokukhona kuthamba ngakumbi kukuguda komphezulu.
Ixesha Post: Aug-06-2020